Proverbe 158 Akondro ambanana antsy : mihatra raha ela. [Rinara 1974]
Proverbe 612 Antsy be vaky maso : ka na tsy hitan' ny olona aza, hitan' ny hazo . [Houlder 1895 #1078]
Antsibe vaky maso , na tsy hitan' ny olona aza hitan' ny hazo . [Rinara 1974 #305, Cousins 1871 #258]
Antsibe vaky maso , na tsy hitan' ny tompony aza, hitan' ny hazo . [Veyrières 1913 #15, Cousins 1871 #258]
Antsibe vaky maso , na tsy hitan' olombelona aza, hitan' ny hazo . [Veyrières 1913]
Proverbe 613 Antsy fiharatra novelezin-tantanana : fisaky ny ray aman-dreniny . [Veyrières 1913 #617, Cousins 1871 #255]
Antsy fiharatra novelezin-tantanana , ka fisaky ny ray aman-dreny . [Rinara 1974]
Proverbe 803 Aza atao antsy anomindana akoho : maty tankinan’ ny ra. [Veyrières 1913 #3834, Cousins 1871 #337, Rinara 1974]
Proverbe 1373 Aza mihambom-po banga nify , ka tsy mitondra miso mandeha . [Houlder 1895 #2057, Veyrières 1913 #6220, Cousins 1871 #613]
Proverbe 1432 Aza mitabataba tonga rafozana : akoho iray no hovonoina ka telo lahy no asaina mindram-pamaky . [Rinara 1974]
Interprétation malgache Mihetsiketsika be, nefa tsy hita izay vita, lasan-ko vavany . [Rajemisa 1985]
Proverbe 1460 Aza mitompo teny fantatra , toa antsy kely be zarana . [Houlder 1895 #845]
Mitompo teny fantatra tahaka ny antsikely be zarana . [Rinara 1974 #2471]
Mitompo teny fantatra toa antsikely be zarana . [Veyrières 1913 #6368]
Mitompo-teny fantatra , toy ny antsikely be zarana . [Cousins 1871 #1880]
Proverbe 1496 Aza mpanefy tsy manana antsy . [Rinara 1974]
Proverbe 1594 Banga very antsy ka manantena fa ho kenda . [Rinara 1974]
Proverbe 1792 Didian’ ny antsy no misy romoromo, fa ny didian’ ny vava tsy mba misy romoromo. [Cousins 1871 #840]
Didian' ny antsy no misy romoromo , fa ny didian' ny vava tsy misy romoromo . [Rinara 1974 #985]
Ny didian' ny antsy mbola misy romborombo , fa ny didian' ny lela tsy mba misy romborombo . [Veyrières 1913 #3285]
Ny didian' ny antsy mbola misy romoromo , fa ny didian' ny lela tsy mba misy romoromo . [Veyrières 1913 #3285]
Proverbe 1793 Didy henan’ ny dombo antsy : botraika no sisa manapaka azy. [Veyrières 1913 #6352, Cousins 1871]
Didy henan’ ny dombo antsy : tapaka , fa be romoromo. [Veyrières 1913 #6353, Cousins 1871]
Proverbe 1868 Efa tsy efa karaha fary nifoasan’ antsy . [Samson 1965 #E4]
Proverbe 3374 Malaza ho ambora be ka lavon' ny antsy fitohy . [Houlder 1895 #1379, Veyrières 1913 #1646]
Proverbe 3490 Manana asam-be tsy malombon' antsy . [Samson 1965 #M24]
Proverbe 3728 Mandry an-driran' antsy . [Veyrières 1913 #2720]
Mandry an-driran-defona . [Veyrières 1913 #2720]
Proverbe 3928 Matavy omby sa maranitra antsy no dia mihomehy olona ! [Rinara 1974 #2168]
Matavy omby va hianao, sa maranitra antsy , no dia homehy olona ? [Cousins 1871 #1655]
Matavy omby va, sa maranitra antsy , no mihomehy olona ? [Houlder 1895 #1433]
Proverbe 4138 Mifanaraka izany, fa ny antsy hantsika, ny akala montotra . [Rinara 1974 #2301, Cousins 1871 #1754]
Proverbe 4262 Miolanolana ohatra ny banga very antsy . [Rinara 1974]
Proverbe 4286 Miranirany tsy hakapa , toy ny antsin- dRamarosikina . [Veyrières 1913 #5811, Cousins 1871]
Proverbe 4523 Mizara be mahahendry , mizara kely maha-adala (ahazoana tsiny ). [Rinara 1974 #2531]
Proverbe 4721 Nahoana no dia mpanefy ka dombo antsy ? [Houlder 1895 #733]
Nahoana no mpanefy , ka dombo antsy ? [Cousins 1871 #2058]
Proverbe 6228 Ranalahin-trandraka amoterana razan’ antsy . [Samson 1965 #R23]
Proverbe 6927 Tapak’ antsin' ny vaka, hanin’ ny mahery. [Samson 1965 #T42]
Proverbe 7614 Tsy mba roa vao mahatapaka tahaka ny hety aho, fa antsy mahaleo tena . [Houlder 1895 #868]
Tsy mba roa vao mahatapaka tahaky ny hety aho, fa antsy mahaleo tena . [Veyrières 1913 #6195]
Proverbe 8103 Vato mifono raty : mamitaka ny mpanan’ antsy . [Samson 1965 #V32]
Proverbe 8189 Viavy razan’ antsy : fandriandrian-dava . [Samson 1965 #V52]